Eminem တဈယောကျ Gay Dating App ကို အသုံးပွုနပွေီလား ? ? ? – SoShwe
Home/Entertainment/Eminem တဈယောကျ Gay Dating App ကို အသုံးပွုနပွေီလား ? ? ?
Eminem တဈယောကျ Gay Dating App ကို အသုံးပွုနပွေီလား ? ? ?
So Shwe January 25, 2020	Entertainment, Funny Leaveacomment
လူမှုကှနျရကျပျေါ၌ ခတျေစားနသေညျ့ #DollyPartonChallenge ကို အငွငျးပှားဖှယျ ပုံစံဖွငျ့ ပွုလုပျပွသှားခဲ့သညျ့ ကမ်ဘာကြျောရကျပျပါ Eminem ကိုမညျသူမှနျးမသိရှိကွောငျး Grindr ရဲ့ တှဈတာအကောငျ့မှတဈဆငျ့ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။ LINKEDIN၊ Facebook၊ Instagram နဲ့ Tinder တို့အပျေါ၌ လူပုဂ်ဂိုလျတဈဦးတဈယောကျတညျးရဲ့ မတူညီသညျ့ပုံစံမြားကို ဖျောပွနသေညျ့ အဆိုပါ Challenge ကို ဂန်တဝငျအဆိုတျောကွီး Dolly Parton စတငျပွုလုပျခဲ့ရာမှတဈဆငျ့ ရပေနျးစားလာခဲ့ခွငျးဖွဈကာ လကျရှိအခြိနျ၌ နာမညျကြျောအမြားအပွားပငျ လိုကျလံလုပျဆောငျနပွေီး Eminem ကမူ Tinder ရဲ့နရော၌ Grindr ကို အစားထိုးပွီး လုပျပွသှားခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။
Tinder သညျ သမာရိုးကြ Dating Service ပေးသညျ့ Application တဈခုဖွဈပမေယျ့ Grindr မှာမူ Gay မြားအတှကျ ရညျရှယျဖနျတီးထားသညျ့ Application တဈခုဖွဈပါတယျ။ LINKEDIN နဲ့ Facebook တို့ကို ပုံဖျောထားသညျ့ Eminem ရဲ့ ဓာတျပုံမြားက ထှထှေထေူးထူး ပွောစရာမရှိပမေယျ့ Instagram နဲ့ Grindr တို့အတှကျရညျရှယျထားသညျ့ သူ့ရဲ့ ဓာတျပုံမြားက ပရိသတျမြားအတှကျ ဝဖေနျစရာဖွဈခဲ့ပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ Grindr ကိုရညျညှနျးသညျ့ပုံ၌ အဝတျအစားမပါသညျ့ Eminem က မီးရှူးမီးပနျးတဈခုကို ကိုငျဆောငျပွီး သူ့ရဲ့အရှကျကိုဖုံးကှယျထားရာ အဆိုပါဓာတျပုံနဲ့ ပတျသကျ၍ ပရိသတျမြားက အမြိုးမြိုး မှတျခကျြပေးခဲ့ကွကွောငျး သိရှိရပါတယျ။ Eminem သညျ Gay မြားအပျေါ ဆနျ့ကငျြသူတဈယောကျဖွဈကွောငျး သူ့ရဲ့သီခငျြးစာသားအခြို့က သကျသပွေနပွေီး သူ့ရဲ့ယခုလုပျရပျအပျေါ Grindr ဘကျကလညျး ခကျြခငျြးဆိုသလိုပဲ တုံ့ပွနျခဲ့ပါတယျ။
Grindr က သူတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျတှဈတာအကောငျ့မှ Eminem ရဲ့ ဓာတျပုံကို “Who” ဟု Caption ရေးသားကာ ပွနျရှဲခဲ့ပွီး အဓိပ်ပာယျအရ “ငါတို့ ဒီအကွောငျးကို ပွောဖို့ မုနျးတီးပါတယျ။ အခုဒီစကားကို ရယျစရာမဖွဈဖို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ သူက ဘယျသူလဲဆိုတာ မသိပါဘူး။” ဟုတုံ့ပွနျရေးသားခဲ့ကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
သိုပမေယျ့ Grindr ရဲ့ ရေးသားခကျြအပျေါ Eminem တဈယောကျလကျရှိအခြိနျအထိ ပွနျလညျတုံ့ပွနျခွငျးမရှိသေးကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။
Eminem တစ်ယောက် Gay Dating App ကို အသုံးပြုနေပြီလား ? ? ?
လူမှုကွန်ရက်ပေါ်၌ ခေတ်စားနေသည့် #DollyPartonChallenge ကို အငြင်းပွားဖွယ် ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ပြသွားခဲ့သည့် ကမ္ဘာကျော်ရက်ပ်ပါ Eminem ကိုမည်သူမှန်းမသိရှိကြောင်း Grindr ရဲ့ တွစ်တာအကောင့်မှတစ်ဆင့် ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ LINKEDIN၊ Facebook၊ Instagram နဲ့ Tinder တို့အပေါ်၌ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းရဲ့ မတူညီသည့်ပုံစံများကို ဖော်ပြနေသည့် အဆိုပါ Challenge ကို ဂန္တဝင်အဆိုတော်ကြီး Dolly Parton စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှတစ်ဆင့် ရေပန်းစားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ လက်ရှိအချိန်၌ နာမည်ကျော်အများအပြားပင် လိုက်လံလုပ်ဆောင်နေပြီး Eminem ကမူ Tinder ရဲ့နေရာ၌ Grindr ကို အစားထိုးပြီး လုပ်ပြသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Tinder သည် သမာရိုးကျ Dating Service ပေးသည့် Application တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် Grindr မှာမူ Gay များအတွက် ရည်ရွယ်ဖန်တီးထားသည့် Application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ LINKEDIN နဲ့ Facebook တို့ကို ပုံဖော်ထားသည့် Eminem ရဲ့ ဓာတ်ပုံများက ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာမရှိပေမယ့် Instagram နဲ့ Grindr တို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားသည့် သူ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံများက ပရိသတ်များအတွက် ဝေဖန်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် Grindr ကိုရည်ညွှန်းသည့်ပုံ၌ အဝတ်အစားမပါသည့် Eminem က မီးရှူးမီးပန်းတစ်ခုကို ကိုင်ဆောင်ပြီး သူ့ရဲ့အရှက်ကိုဖုံးကွယ်ထားရာ အဆိုပါဓာတ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်၍ ပရိသတ်များက အမျိုးမျိုး မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ Eminem သည် Gay များအပေါ် ဆန့်ကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့သီချင်းစာသားအချို့က သက်သေပြနေပြီး သူ့ရဲ့ယခုလုပ်ရပ်အပေါ် Grindr ဘက်ကလည်း ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Grindr က သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တွစ်တာအကောင့်မှ Eminem ရဲ့ ဓာတ်ပုံကို “Who” ဟု Caption ရေးသားကာ ပြန်ရှဲခဲ့ပြီး အဓိပ္ပာယ်အရ “ငါတို့ ဒီအကြောင်းကို ပြောဖို့ မုန်းတီးပါတယ်။ အခုဒီစကားကို ရယ်စရာမဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သူက ဘယ်သူလဲဆိုတာ မသိပါဘူး။” ဟုတုံ့ပြန်ရေးသားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
သိုပေမယ့် Grindr ရဲ့ ရေးသားချက်အပေါ် Eminem တစ်ယောက်လက်ရှိအချိန်အထိ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
Previous အသငျးရဲ့ကွယျပှငျ့ကစားသမားဟောငျးကို ပွနျလညျချေါယူရနျ ကွိုးစားနသေညျ့ တော့တငျဟမျ ဟော့စပါး။
Next ရာသီကုနျမှာ ယူနိုကျတကျကို ပွနျလာမညျ့ တိုကျစဈမှူးတဈဦး။